nothing Archives - Page2of 50 - Saturngod
Digital Ocean Space with Laravel
ကျွန်တော်တို့တွေ အနေနဲ့ file storage အတွက် သီးသန့် server အစား amazon s3 ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ Digital Ocean က s3 အတိုင်း Digital Ocean Space ဆိုတာ ထုတ်ထားပါတယ်။ s3 နဲ့ api အတူတူပဲ ဖြစ်ပြီးတော့ end point ပဲ ကွာပါတယ်။ Create Space Space ကို ဆောက်ဖို့ အတွက် Digital Ocean ကို Login ဝင်ပါ။ CreateaSpace ကို နှိပ်ပါ။ Region ကို ရွေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ Singapore ပဲ ရွေးပါတယ်။ Allow file listing မှာတော့ Restrict File… Continue reading Digital Ocean Space with Laravel
Categorized as nothing Tagged Book, programming
၂၀၁၈ ထဲရောက်လို့ ဖေဖော်ဝါရီတောင် ရောက်ပြီ။ နှစ်စ ကတည်းက အလုပ်ရှုပ်နေတာနှင့် အခုမှ ၂၀၁၇ မှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဘာတွေ ပြီးခဲ့လဲဆိုတာကို ပြန်ချရေးဖို့ အချိန်ရှိတော့တယ်။ ၂၀၁၆ အကုန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်ပြီး ယောင်ချာချာ ဖြစ်နေပေမယ့် ၂၀၁၇ မှာ ကိုယ်ပိုင် startup သေးသေးလေး စဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၇ ၁ နှစ်လုံးက ဘဝ အတွက် သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး ရခဲ့သည့် နှစ်ပဲ။ အထူးသဖြင့် သား ကို ၂၀၁၇ နှစ်စ မှာ မွေးခဲ့တော့ ၁ နှစ်လုံး သားရယ် အလုပ်ရယ် နှင့်ပဲ အချိန်တွေက အတော်လေးကို ကုန်သွားတယ်။ ၁ နှစ်ကုန်သွားလို့ ဘာစာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်လဲလို့… Continue reading ၂၀၁၇
Blog ရေးလာတာ ၁၁ နှစ်တောင် ရှိခဲ့ပြီ။ နှစ်တိုင်းလည်း ကျွန်တော် blog စရေးဖြစ်ခဲ့သည့် အကြောင်းလေးတွေ ရေးတတ်တယ်။ အခုအချိန်မှာ blog ဆိုတာ facebook ပေါ်က post တစ်ခုလောက်တောင် လူတွေ မသိကျသည့် အချိန်ပါ။ သို့ပေမယ့် facebook post တွေထက် ကျွန်တော့် blog posts တွေကို ပိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ဒီ ၁၁ နှစ်ကာလအတွင်းမှာ ကျွန်တော် ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဘာတွေကို စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ ဘာတွေကို လေ့လာခဲ့တယ် ဆိုတာတွေ အကုန်လုံးဟာ ကျွန်တော့် blog ပေါ်မှာ ရှိနေတယ်။ တစ်ခြားလူတွေ အတွက်တော့ သိပ်ပြီး အသုံးမဝင်လှပေမယ့် ကျွန်တော့် ဘဝ သမိုင်းကြောင်းကတော့ ကျွန်တော် ရေးသားခဲ့သည့်… Continue reading ၁၁ နှစ်
Categorized as nothing Tagged life
Productivity is more important than benchmarking
Programming စလုပ်ကာစက ဘယ် framework မြန်သလဲ။ ဘယ် language မြန်လဲဆိုပြီးတော့ programming language ကို လေ့လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း python , node.js စတာတွေ နဲ့ အသုံးပြုခဲ့တာ များတယ်။ သို့ပေမယ့် ဖြစ်ဖြစ် မြောက်မြောက် ကြီးကြီးမားမား ဖန်တီး ဖြစ်ခဲ့တာတော့ မရှိဘူး။ Github က ကျွန်တော့် code တော်တော်များများကတော့ python , node.js တွေ များတယ်။ တကယ်တန်း အလုပ်ခွင်မှာတော့ အလုပ်ဖြစ်ဖို့ က ပိုပြီးတော့ အရေးပါပါတယ်။ ပုံမှန် web app အနေနဲ့ နှေးတယ်ဆိုရင် hardware level ကို မြှင့် ပြီးတော့ ဖြေရှင်းလို့ ရသလို… Continue reading Productivity is more important than benchmarking
iPhone 8 design confirm ?
အခုတလော Twitter မှာ HomePod’s firmware ထဲမှာ iPhone 8 design ပါဝင်လာတာကို ရေးသာားကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါ့အပြင် Apple Pay ရဲ့ Animation Glyph မှာ ပါလာသည့် အတွက် သေချာသလောက်ပါပဲ။ Here are the two iPhone face designs for the Apple Pay payment animation glyph (the old one beinga5S) pic.twitter.com/67QxOd1Dlf — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) August 1, 2017 နောက်ပြီးတော့ code တွေ အရဆိုရင်တော့ သေချာသလောက်… Continue reading iPhone 8 design confirm ?
Categorized as nothing Tagged apple, iOS, leak
၈ တန်း နဲ့ ၉ တန်းမှာ ဆရာ ဦးလေးနိုင် နဲ့ ဒဂုံ ၁ မှာ သင်ခဲ့ရတယ်။ ဆရာက အသင်ပြ ကောင်းသလို အရိုက်လည်း ကြမ်းတယ်။ ဆရာ ပြောခဲ့သည့် စကား တစ်ခုက အခု အသက်အရွယ် ထိ မှတ်မိနေတုန်းပဲ။ ဆရာတွေကို မေးပါ။ ဆရာတွေမှာ ကျောင်းသားတွေကို မပြောဖြစ်သည့် အချက်လေးတွေ ပညာလေးတွေ ရှိတယ်။ ကျောင်းသား ဆိုတာက အဲဒါလေးတွေကို ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီး ဆရာတွေကို မေးခွန်း မေးတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သဘော မပေါက်ခဲ့ဘူး။ အသက်ကြီးလာပြီး အလုပ်ဝင်သည့် အခါမှ မေးခွန်း မေးဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကို တော်တော်လေး သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ မေးခွန်း မေးသည့်… Continue reading မေးပါ
Programming Basic စာအုပ်ကို Chapter5အပြီး မှာ ရပ်သွားတာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ အခုတော့ Chapter6ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ် အခန်း ၄ ခန်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ Chapter7ကိုတော့ နောက် အပတ်ထဲမှာ အပြီးရေးဖို့ ရှိတယ်။ အခက်ဆုံးအပိုင်းက Chapter 8 နှင့် ၉ ပဲ။ 8 အပိုင်းကို လူတိုင်း နားလည်အောင် သေချာရေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်မှာ အကုန်ပြီးအောင် ရေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။